အကျပ်အတည်းတစ်ခုတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းကောင်းချဖို့ ရိုးရှင်းသောအဆင့် (၇) ဆင့်
ကျွန်မတို့အားလုံးက လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဖင်တကြွကြွနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး အရာရာကို သတိထားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ပုံမှန်အလုပ်တွေကလည်း မသေချာ မရေရာတော့ဘဲ နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်လာမယ်အကျိုးဆက်တွေကိုသာ စောင့်ကြည့်နေကြရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရပ်တန့်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုသလို ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ မျက်နှာတွေလည်း စိုးရိမ်သောကတွေနှင့် စိတ်မကြည်မသာဖြစ်နေကြပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့နဲ့ ပိန်မသာ လိန်မသာဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ့်ဘဝတွေ၊ စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို အပြောင်းအလဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီး ဖိအားအမျိုးမျိုးနှင့် ကျဉ်းထဲ ကြပ်ထဲရောက်နေချိန်မှာ ကျွန်မတို့ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မချမဖြစ်ချဖို့ ရွေးချယ်ကြရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ စိတ်ပျက်အားလျှော့စေတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း ချမိကြပြီး တစ်ချိန်မှာ နောင်တရမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းက အင်မတန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်တာကြောင့် အောက်ပါအချက်အလက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
၁။ အချိန်တစ်ခု ယူပါ
အကျပ်အတည်းကာလမှာ သင့်အနေနဲ့ အရေးပေါ် (သို့) ထိတ်လန့်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အခုချက်ချင်း အရာအားလုံးဖြစ်ပျက်တော့မလိုမျိုး ခံစားချက်နှင့်အတူ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သင့်အနေနဲ့ အရာအားလုံးကို လုပ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဖိအားတွေကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်သေးခင်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုမချခင် ခဏလောက်အနားယူပြီး အသက်ရှူပါ။ အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကို အမှန်အတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ အချိန် တစ်မိနစ်ယူပါ။
သင့်အနေနဲ့ ခုချိန်မှာ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေ အလျင်စလိုချမိမယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သက်သာကောင်း သက်သာစေနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအမှန်ကို မြင်နိုင်ဖို့၊ ဒီအကျပ်အတည်းဟာ သင့်အပေါ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်ဖို့ နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ပါ။
၂။ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပါ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းရပါမယ်။ ပြဿနာနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးများကို တတ်နိုင်သမျှ များများဖတ်ပါ။ လှုံ့ဆော်အားပေးသော ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို ကြည့်ပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းကနေ အကြံပြုချက်များ ယူပါ။ သင့်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေ သိရစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာကို အမှန်တကယ်နားလည်ပြီး ၎င်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သင့်တော်သော အဖြေတစ်ခုကို ရှာနိုင်ဖို့က အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းက ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပေမယ့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိပြုမိပြီး သင့်ကိုလည်း စိတ်သက်သာရစေပါတယ်။ လူအများစုက အကျပ်အတည်းကာလမှာ အဖြေရှာဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
၃။ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို စဉ်းစားပါ
အကြံဉာဏ်များကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီး ရွေးချယ်မှုအားလုံးကို ချရေးပါ။ လက်ရှိပြဿနာတွေအတွက် ဖြေရှင်းနည်းအမျိုးမျိုးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားပါ။ သင့်မှာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေလိုအပ်ပြီး အဲဒါတွေကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်း ဦးစားပေးလုပ်ရပါမယ်။
ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေကို စဉ်းစားမိတိုင်း ဖြေနိုင်ခြေများစွာ ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဦးစားပေးအရာတွေကို ရွေးထုတ်ပါ။ သင့်အတွက် လက်ရှိအချိန်အတွက် ဘယ်အရာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို သတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အကျပ်အတည်းတစ်ခုမှာ လူတိုင်းက တုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချိန်မှာ သင်ဟာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ သင့်စိတ်က တည်ငြိမ်ပြီး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်လား? ဒါမှမဟုတ် ပျာယာခတ်ပြီး ထိတ်လန့်နေလား? သင်ဟာ ထိတ်လန့်လွယ်သူဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် မိသားစုထံဆက်သွယ်ခြင်းက ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြနိုင်ပြီး သင့်အတွေးတွေကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်စိတ်တွေက ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို စတင်ပါ။ သင့်အစီအစဉ်တွေကို တစ်ခြားလူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ သင့်အစီအစဉ်တွေကို ရှင်းပြဖို့ မြေပုံများ၊ မှတ်စုများ (သို့) ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်တွေကို ဖန်တီးပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ သင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက် တွေးပူပြီး အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။ အဲ့ဒီ့အစား သင်လုပ်နိုင်တာကို အာရုံစိုက်ပါ။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းမိသလောက်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်မှုတွေကို စဉ်းစားပြီးတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့က အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲ ဒီအတိုင်း ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ နေနိုင်လျှင် ပိုလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ခုခုဆုံးဖြတ်လိုက်တာက ပိုကောင်းတာတွေလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သင်လုပ်ခဲ့ပြီးသမျှကို အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမဆို အကျပ်အတည်းတစ်ခုမှာ အနာဂတ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းတွေကနေ သင်ခန်းစာယူစရာအကြောင်းအရာတွေများစွာ ရှိနေပါတယ်။
အကျပ်အတည်းပြီးသွားသည်နှင့်(မကြာမီပြီးဆုံးလိမ့်မယ်ဟု ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ထားသော) တစ်ပြိုင်နက် သင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော ခက်ခဲတဲ့ကာလကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး မှာ သင့်ကိုယ်သင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့ရနိုင်ရင် ခုချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်မလဲစဉ်းစားပါ။ အဲ့ဒီကာလတုန်းက သင့်အနေနဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ငါဒီအရာကို လုပ်သွားချင်လိုက်တာ (သို့) ဒီလူကို ဒီစကားတွေပြောချင်လိုက်တာ ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကို လက်ရှိအချိန်မှာ သင်စဉ်းစားမိသမျှအရာတိုင်းကို ချက်ချင်းချလုပ်ပါ။